Ka soo degso arjiga tafatirka sawirka bilaash ah Dukaanka Apple: Obscura 2 | Wararka IPhone
Ka soo degso arjiga tafatirka sawirka bilaash ah Dukaanka Apple: Obscura 2
Ma aha codsi aan ka helno App Store si toos ah - oo waliba ah mid ka mid ah dalabyadaas oo u muuqda waqti ka waqti dukaanka Apple, Apple Store. Si aad u hesho Madoow 2 Waa inaan haysanaa codsiga Apple Store (ee alaabada Apple lagu iibsado) oo hoos udhigno si aan u aadno barnaamijka. Mar alla markii aan meel ku helno, waxa kaliya ee inala gudboon waa inaan isweydaarsano koodhka ay noo fidiyaan ee ah inaan bilaash kaga soo dejisanno iPhone-keena.
Bishii hore isticmaaleyaal badan waxay ku soo dejiyeen ciyaartii Starman bilaash, Xaaladdan oo kale, waa barnaamij dib-u-hagaajin sawir ah oo waliba noo oggolaanaya inaan beddelno cabbirka kamaradda si aan u qaadno sawir cusub. Tan waxaan ku dhihi karnaa waxaan wajaheynaa codsi dhab ah oo loogu talagalay dadka jecel miirayaasha sawirada iyo kuwa jecel inay ku ciyaaraan isku dheelitirnaan cad, soo-gaadhis ama arkaan ISO waqtiga qabashada.
Waa ikhtiyaar aad u wanaagsan in la kordhiyo awooda kamaradeena iPhone sidaas darteedna waa barnaamij lagu taliyay dadka jecel sawirada. Codsigan waxaa lagu qiimeeyaa 5,49 yuuro badanaa Apple StoreWaad arki doontaa haddii aad si toos ah ugu tagto dukaanka arjiga oo aad isku daydo inaad soo dejiso, laakiin xaaladdan iyo dadka isticmaala barnaamijka Apple Store ee ku rakiban iPhone ama iPad, waa bilaash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Dukaanka App » Ka soo degso arjiga tafatirka sawirka bilaash ah Dukaanka Apple: Obscura 2
Uma ansaxna wadamada oo dhan.
AR tusaale ahaan
mana aha Chile 🙁
Ku jawaab MM
Badal gobolka barnaamijka dhexdiisa!
U beddel dukaanka app-ka Mareykanka oo aniga ii soo deji, aniga way ii shaqeysay, samee ka hor 25-ka maxaa yeelay maalintaas dalacsiintu way dhammaataa
Sonos wuxuu bilaabayaa Amp, nidaam awood u siinaya qalabkaaga ugu badnaan
Tani waxay noqon kartaa iPad Pro 2018 cusub